Chelsea oo kulanka habeen dambe ee Barcelona uga faa’iideysanaysa inay wada hadalo Xasaasi ah la yeelato Laacibkan…. - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Chelsea oo kulanka habeen dambe ee Barcelona uga faa’iideysanaysa inay wada hadalo Xasaasi ah la yeelato Laacibkan….
March 13, 2018 at 17:37 Chelsea oo kulanka habeen dambe ee Barcelona uga faa’iideysanaysa inay wada hadalo Xasaasi ah la yeelato Laacibkan….2018-03-13T17:37:48+00:00 CAYAARAHA
(Europe) 13 Maarso 2018.Chelsea ayaa u safreysa Spain si ay habeen dambe ula ciyaarto Barcelona lugta labaad ee wareega 16-ka Champions League iyadoo ay xusid mudan tahay in lugtii hore ay ku kala bexeen 1-1.
Blues ayaa la warinayaa in safarkeeda habeen dambe ay uga faa’iideysanayso inay wada hadalo ku aadan Samuel Umtiti la yeelato maamulka kooxda Barcelona.
Daafaca kooxda Catalan-ka ayaa u soo ifbaxay sida bartilmaameed Chelsea ah iyadoo ay jiraan wararka sheegaya inuu hakiyay wada hadalada heshiis kordhintiisa sababo la xiriira dood ku aadan shuruudihiisa shaqsi ahaaneed.
Umtiti oo qandaraaskiisa lagu bur burin karo 53.2 million oo bound oo u dhiganta 60 milyan oo euro ayaa soo jiitay kooxo badan oo ka dhisan England.
Laakiin, sida uu warinayo Don Balon in agaasimayaasha Chelsea ay qorsheynayaa inay wada hadalo la furaan kuwa Barcelona inta lagu guda jiro safarkooda habeen dambe ee Spain.
Inkastoo ay la hadli karaan Umtiti marka ay bixiyaan lacagaha lagu bur burin karo heshiiskiisa ayaa misane la sheegayaa in kooxda reer London ay qorsheynayso inay furto wadooyin ay kula xiriirto si ay mid saaxiibtinimo uga dhigto xiriirkooda.
Barcelona ayaa sida la warinayo ka walaacsan qorshaha Chelsea maadaama ay ku dhibtoonayaan inay bixiyaan lacagaha uu Mushaar ahaanta u doonayo Umtiti.
« Sawirro: Muxuu RW Kheyre kusoo arkay W/ Arimaha Dibadda, Maaliyada & Xeebta Liido
RASMI: Madaxa fulinta ee mid ka mida kooxaha ugu waa weyn Yurub oo xaqiijiyey in ciyaaryahankan ku biiri doono Man City »